Isikhundla esiphezulu semikhiqizo e-Amazon silingana nemali ephezulu yokudayiswa njengoba abasebenzisi abaningi bechofoza imiphumela yokuqala abayibonayo e-Amazon SERP ephendula njengezinga eliphezulu kakhulu. Ukuze wenze imikhiqizo yakho ibonakale ekhasini lomphumela wosesho, udinga ukuqonda ukuthi i-A9 ye-Amazon yokusesha i-algorithm isebenza kanjani.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngesimiso somsebenzi oyisisekelo we-Amazon usezingeni le-algorithm futhi uqaphele ikakhulukazi isici ngasinye.
A9 noma i-Amazon search ranking algorithm
Ngokwenhlolovo yakamuva eyenziwe yi-PowerReviews, amakhasimende angaphezu kuka-1 000 ase-US aqala ukucinga ngomkhiqizo nge-Amazon. I-Google ifika kwesibili esiseduze, ilandelwa ezinye izindawo ezimakethe ezidayiswayo ze-e-commerce. Labo bantu abaqala ukucwaninga kwemikhiqizo yabo e-Amazon, bachaza ngokukhetha kwabo ngokukhethwa komkhiqizo etholakalayo, ukubuyekezwa, ukuthunyelwa kwamahhala, nokusebenza.
Le nhlolovo ibonisa indlela enamandla ngayo le platform yokuhweba kuwebhu. Inikeza amathuba amaningi nezinzuzo kubathengisi. Noma kunjalo, udinga ukulwa nomncintiswano wembonini yakho ukuze wenze izinto zakho zibonakala ku-Amazon SERP.
Ukuze ube nokuncintisana, udinga ukwazi ukuthi i-Amazon A9 algorithm isebenza kanjani. Okokuqala, kufanele kuqashelwe ukuthi i-A9 ihluke ngokuphelele ku-Google. Uma ikhasimende lifuna umkhiqizo odingekayo ku-Amazon, imiphumela yosesho ithunyelwa ngezinyathelo ezimbili. Esigabeni sokuqala, abasebenzisi bathola okubaluleke kakhulu emiphumeleni yombuzo kusuka kumakhathalogu. Esigabeni sesibili, yonke le miphumela ibalwa ngokuvumelana nokuhambisana nokuthandwa. Injongo eyinhloko ye-Amazon ukukhulisa inzuzo yenkampani jikelele ngamakhasimende ngamunye. Uma isitolo sakho se-intanethi siletha inzuzo engaphezulu ku-Amazon, kungenzeka ukuthi izolandela kwi-TOP ekhasini lomphumela wosesho. I-Amazon iqhubeka isebenza ngaphansi kokuhlelwa kwayo kokuhlelwa kwe-algorithm. Njengamanje, bacabangela izinto ezinjengokuphazamiseka komsebenzisi, ukuhlaziywa kohlelo, amamethrikhi ebhizinisi elikhulu kanye namamethrikhi wokusebenza.
Izinto ezibalulekile ze-Amazon search ranking algorithm
Kunezici ezintathu zokubaluleka okubalulekile ama-Amazon athatha imikhiqizo yokubeka ohlwini ekhasini lomphumela wokucinga:
Izinto ezingathinta izinga lokuguqula zihlanganisa izibuyekezo, ikhwalithi, nobukhulu bezithombe kanye nenqubomgomo yamanani. Uma ungathanda ukuba nenani eliphezulu lokuguqulwa, udinga ukugcina izintengo zakho zincintisana. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukukhiqiza impendulo emihle kwimikhiqizo yakho njengoba inikeza umbono wabathengi abazoba khona mayelana nedumela lakho lomkhiqizo.
Isizathu esiyinhloko esitshela i-Amazon uma sicabangela ikhasi lakho lomkhiqizo ukuthola umphumela wokucinga. Yingakho yonke imikhiqizo yakho kufanele ibe ngezinga eliphezulu ngokuqondene nombuzo womsebenzisi. Ukuze uthuthukise lesi sici, udinga ukusebenza ngaphansi kwesihloko sakho nencazelo kanye nangaphansi kokufakwa kuhlu kwakho. Zonke lezi zigaba zidinga ukulungiswa kahle futhi zibandakanye amagama akho okucinga okuhlosiwe.
Lezi zici zisiza ukugcinwa kwamakhasimende kufaka phakathi impendulo yomdayisi kanye nesilinganiso sokulahlekelwa kwe-oda. Ngakho-ke, imfihlo ilula. Udinga ukwanelisa izidingo zakho zamakhasimende, futhi uzobuya kuwe. Ukubuyekezwa okungcono kakhulu okubuthe kukhasi lakho, amathuba amasha uzoheha amakhasimende angaphezu kwamakhasimende akho ekhasini lakho Source .